1. Inona avy ireo SARM?
2. Ahoana no fiasan'ny SARM?
3. SARMs tombontsoa- Nahoana no ampiasain'ny olona izany?
4. Ireo karazana SARMs- (Varotra mivarotra SARM)
5. Ahoana ny fampiasana SARMs
6. Azo antoka ve ny SARM?
7. Ara-dalàna ve ny SARM?
8. Aiza no hividianana SARM online?
Tsy voatery hitovy amin'ny bodybuilder, modely ara-batana na atleta ianao; Ny zavatra rehetra azonao atao dia ny mampiasa SARM. Raha tsy naheno momba azy ireo ianao na mila fampahalalana bebe kokoa, ity lahatsoratra ity dia hanome anao ny tsipiriany momba ity zava-mahadomelina ity. Izy ireo dia modulators mpanolo-tsaina androgen mifantina izay mampiseho ny karazana fiantraikany toy ny fanafody androgenic, fa ny fahasamihafany ihany dia hoe mifantina kokoa amin'ny asany izy ireo. Ny SARM dia mitovy amin'ny steroids ary koa mahomby amin'ny fampitomboana ny fihenan-tsakafo sy ny fitomboan'ny hozatra. Ny tombotsoan'ny SARM dia mitovy amin'ny an'ny steroide anabolic, ny fihetsika ataon'izy ireo dia mahatonga ny SARM tsy ho vitsy kokoa. Midika izany fa rehefa manapa-kevitra ny hampiasa SARM ianao, dia miangavy ny fialan-tsasatra amin'ny olana momba ny tsy fahasalamana hormona, aknè, virilisma amin'ny vehivavy sy ny olana amin'ny prostate izay mety ho vokatry ny fampiasana steroïde sasany.
Efa nisy ny SARM nanomboka tamin'ny Ady Lehibe II ary novolavola tamin'ny alalan'ny fanovana ny molekiolan'ny testosteron. Ao amin'ny 40, dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny osteoporose, ny homamiadana ary ny aretina hafa izay nitarika ho amin'ny hozatra sy taolana. Ankehitriny, misy karazana SARM maro karazana ao amin'ny tsena, anisan'izany MK-2866, LGD4033, YKII, RAD140, MK677, ary ny hafa. Mety hanontany tena ianao hoe nahoana izy rehetra no manana anarana isa-be. Ny antony dia mbola tsy nanonona azy ireo ny mpividy ara-barotra fa tsy mbola ankatoavina ara-medaly.
Mba hahafantaranao tsara ny fomba fiasan'ny SARM, mila mahatakatra ny fomba fiasan'ny hormones ao amin'ny vatantsika isika. Ny hormones dia mpandefa hafatra ao amin'ny vatana amin'ny fifandraisana amin'ny sela. Raha vantany vao vita ny fifandraisana, dia atao ny didy voafaritra.
Ny hormones izay mampitombo ny maha-lahy na maha-vavy (ny fihenan'ny vatana, ny hatavezina lehibe kokoa, ny volom-behivavy, ary ny feo lalindalina kokoa) dia antsoina hoe androgens. Misy maromaro amin'izy ireo, anisan'izany ny Testosterone. Ireto ny fomba fiasan'ny andrônina ny asany ao amin'ny vatana;
Izy ireo dia niova ho dHT (dihydrotestosterone) hormonina ary avy eo dia mamehy ny mpanamboatra androgen.
Mamehy ny sela androgen receptors.
Izy ireo dia niova ho hormona estradiol (estrogen) izay mamehy amin'ny mpikatroka estrogen.
Amin'ny ankapobeny, ny vatanao dia mamaritra ny famokarana androgen mba hisorohana ny tsy fitoviana. Raha misy steroids anabolic, dia simba ny androkely ny sela, ary lasa mpangalatra ny mpitsabo rehetra. Noho izany, hafatra dia alefa any amin'ny sela rehetra izay mitondra mankany amin'ny fitomboany. Mety ho tombony ho an'ny olona mitady hozatra ny hozatra, nefa tsy dia misy dikany izany.
Izy io dia misy fiantraikany lehibe hafa, ny sasany dia azo havaozina raha tsy misy ny sasany. Ny vokatry ny fihenan-tsofina dia ahitana sombin-tsolika ambany, fampitomboan'ny herisetra ary ny fiakaran'ny tosidra. Mety hahatonga ny hoditra sy ny volo, ny cysts, ny acne, ary ny atidoha atody. Anisan'ireo tsy mety resy ireo; gnecomastia, aretina ny atiny, disfunction ny fo, ary baldness ny lahy. Ny steroïda koa dia mitondra any amin'ny fiankinan-doha ary ny mpampiasa dia tokony hampiasa azy ireo mandritra ny androm-piainany.
Noho ireo antony voalaza etsy ambony ireo dia nanapa-kevitra ny mpahay siansa fa hampiasa fanafody steroïde toy ny fanafody izay manome tombontsoa mitovy amin'ny steroid, saingy tsy mitondra ny fahasimban'ny fahasalamana sy ny fahasalamana. Ahoana ny fiasan'ny Synephrine HCL eo amin'ny vatanao?
Soa ihany, ny SARM dia miasa toy ny steroids amin'ny alalan'ny fanentanana ny mpanamboatra androgen saingy izy io ihany no manao izany ao anatin'ny taolana sy ny hozatry ny hozatra. Midika izany fa tsy miova ny sela rehetra ao amin'ny vatana. SARM dia afaka manao izany satria;
Tsara kokoa ny manintona ny vatany manokana toy ny taolana sy ny hozany, fa tsy ho an'ny olona toy ny atidoha, ny atiny ary ny prostate.
Tsy niova ho molekiolana tsy ilaina izy ireo toy ny estrogen na DHT izay mety hiteraka vokatra mahatsiravina.
Raha oharina amin'ny steroids matetika, ny SARM dia tsy manakana ny famokarana testosterone voajanahary izay mahatonga azy io ho mora ho sitrana aorian'ny fiovan'ny SARM.
Araka ny efa voalaza aloha dia iray amin'ireo tombontsoa lehibe amin'ny SARM dia ny fahafahan'ny vatanao hankafy ny tombontsoa rehetra ampiasain'ny steroids ampiasaina raha tsy manao sorona ny fahasalaman'ny vatanao. Ireto ny antony mahatonga ny SARMs ho toy ny fasana masina amin'ny fanorenana bodista;
Tena mifantina amin'ny zavatra ataon'izy ireo izy ireo ka tsy mety hanimba ny vatanao hafa.Mety tsy te hanimba ny vatan'ny vatanao angamba ianao satria te hampitombo ny habetsahan'ny hafa. Izany no mahatonga ny olona maro maniry hampiroborobo ny asany amin'ny fampiasana SARM satria manova ny vatana izay mitarika ho amin'ny fitomboan'ny taolana sy ny hozany.
Ny SARM dia tsy mahatonga ny estrogen hivadika ho dihydrotestosterone. Ny fiovan'ny Estrogen dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny vatana toy ny mahatonga ny tendrony mampidi-doza sy ny fahaverezan'ny vokatra eo amin'ny vehivavy, ary tsy toy ny fanatsarana hafa amin'ny fampiroboroboana ny SARM dia tsy hiteraka izany.
Tsy hitondra mankany amin'ny fihenan'ny libido anao izany.Tsy mampidina ny libido ny SARM; Ampitomboiny izany, ary hampitombo ny fiainanao amin'ny fanaovana firaisana.
Ny SARM sasany dia mety hanala ireo olana amin'ny prostaty samihafa.Tsy tonga izy ireo amin'ny olan'ny prostaty ary manala azy ireo raha misy izany. Noho izany, azonao antoka fa ny olana eo amin'ny prostateo dia zavatra iray amin'ny lasa ary tsy misy fihenan-tsakafo.
Raha maro ny steroïde eny an-tsena dia mety hitarika ho amin'ny taolam-paty na fahaverezan'ny taolam-paty, TSY tsy hanao izany ny SARM. Ny SARM dia miady amin'ny ala noho ny hozatra, indrindra mandritra ny fotoana fanarenana.
Hanosika ny fitomboan'ny hozatrao izy ireo. Ny bodybuilder tsirairay dia liana amin'ny fitomboana sy ny fampiroboroboana ny hozatra ao amin'ny vatany ary ny SARM dia hanafatra izany. Ny SARM dia miasa amin'ny fifandraisana mifototra amin'ny mpanolo-tsain'ny androgen ka mampitombo ny habetsaky ny glucose sy ny azôty raisin'izy ireo. Noho izany dia misy fitomboana ny fihenan-tsakafo anana amin'ny taolana sy ny hozatra.
Na izany aza, ny habetsaky ny hozatra izay ho azonao dia miankina amin'ny toe-javatra sasany toy ny hoe SARMs izay tapa-kevitra ny hampiasa. Raha mampiasa ny SARM tsara indrindra ianao, dia mety ho voapoizin'ny masomboly 20lbs.
Ampitomboy ny fiaretana. Ny fahafaha-manana fahasalamana ampy izay afaka mametraka fotoana maharitra sy mandresy lahatra ny fanatanjahantena tsy alaina intsony dia inona no tadiavin'ny atleta sy biriky rehetra. Ny vaovao tsara dia efa manapa-kevitra ny hampiasa SARMs ianao, hanampy anao hiasa maharitra kokoa noho izany ny famelomana kokoa ny hozanao. Izany dia satria ny SARM dia miasa amin'ny fampitomboana ny fibresin'ny vozona hitarika amin'ny fampitomboana ny fikarakarana oksizenina ka hahazoana hery bebe kokoa mba hanamafisana kokoa ny fotoana maharitra.
Mampihena ny vatana fati-Raha tadiavinao ny fahaverezan'ny vatana, dia hanampy anao handoro izany amin'ny fomba samihafa ny SARMs. Ireo vokatra ireo dia manosika ny vatana handrodana ireo sela matavy amin'ny tanjona hamokarana herinaratra. Ny vatana, toy izany, dia miasa toy ny amin'ny hanoanana ary amin'ny alalan'izany dia misy fihenam-bidy mavesatra ny vatana.
Ampitomboy ny dian-Ny fihenan'ny dity ny taolana dia misy olana maro toy ny fijaliana amin'ny taolana tapaka sy ny fery. Ny SARM dia manohitra izany amin'ny fampitomboana ny endriky ny taolam-paty izay manatsara ny fahasimban'ny taolana. Ny fomba hafa ampiasain'ny SARM dia amin'ny fampihenana ny fivarotana taolana tapakila sy endokortikaol, noho izany, manangana taolana mahery.
Tsy hanimba ny atinao izy ireo satria tsy misy poizina. Ny SARM dia hanampy amin'ny fahasalamanao, fa tsy toy ny steroids hafa izay mety hanimba ny atiny.
Toetran'ny fanasitranana marary.Ny fanaintainana iombonana dia vokatry ny fahanterana na ny lozam-pifamoivoizana, ary olana mahazatra indrindra ho an'ireo izay mandray anjara amin'ny fiasa ara-batana mafy. Ny zava-misy dia tsy misy vahaolana maharitra ho azy io, fa amin'ny fampiasana SARMs, azonao antoka fa ho tsara ianao ary hanohy ny fiainanao ara-dalàna haingana.
Tanjaka tsara kokoa- Ho vavolombelon'ny tanjaka mahery vaika izay hahatonga anao hahatsapa ho toy ny vaovao anao.
Famaranana ny fahasimbana- Ny SARM dia afaka manapaka ny fotoana fanarenana anao amin'ny antsasaky ny mamela anao hanohy ny fampiofanana momba ny fampiofanana.
Azo antoka ho an'ny volonao. Amin'ny SARM dia tsy hijaly amin'ny volo na ny baldness ianao ary matoky ianao fa hahatsapa hozatra mafy amin'ny volonao ianao.
Tsy misy fiantraikany mafy amin'ny Hypothalamus-Pituitary-Testes-Axis.
Tsy miteraka lozam-pifamoivoizana izy ireo toy ny fahatezerana na ny herisetra.
Fampiasana am-bava. Tsy misy tsindrim-peo sy fanaintainana vokatry ny fisokafana matetika. Na tsara kokoa aza, ny dosage am-bava dia midika fa tsy atahorana ho voan'ny aretina ianao ao amin'ny faritra fanjifaliana.
Tsy misy fanamarihana-Ny SARM sasany dia tsy azo ihodivirana mandritra ny fitsapana zava-mahadomelina.
Izany no SARM tsara indrindra izay efa nianatra. Antsoina hoe Ostarine koa izy io. Ny fandinihana natao dia mampiseho fa ny MK-2866 dia mahomby indrindra amin'ny fampidirana ny hozatra ary ny tombony izay miaraka aminy dia tsy manana fiantraikany maro. Inona koa no tadiavin'ny bodybuilder?
Miaraka amin'ny MK-2866, afaka manantena hahazo tebiteby isan-kerinandro ianao. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia mampiditra ny fomba fiasa tsara indrindra. Raha ny dosage dia mihoatra ny 25mgs isan'andro isan'andro maherin'ny iray volana, ny PCT dia tokony hisorohana ny fanafoanana.
Nahita an'i Yuichito Kanno izy io, ary iray amin'ireo SARM tsara indrindra izy io satria tena mahasoa amin'ny fatiantoka matavy sy mahazo ny hozatra tsy misy aretina hafa toy ny fahavoazan'ny atiny na ny tosidra ambony.
Antsoina hoe Testolone koa izy io ary anisan'ny saro-tahotra mafy indrindra ao amin'ny tsena. Miaraka amin'ny dosage an'ny 10mg isanandro, dia mahazo fitomboana ny tanjaky ny hery mamy sy hery. Manatsara ny libido koa izany. Ataovy foana ny PCT aorian'ny fampiasana azy.
Ity misy SARM hafa izay nianatra tsara kokoa. Izy io dia novolavolan'ny Ligand Pharmaceuticals voalohany, ary nisedra olana maro avy amin'ny olombelona izy ary voaporofo fa zava-mahaliana mahaliana.
Fianarana natao tamin'ny lehilahy salama izay nandray LGD4033 Nandritra ny roapolo andro dia nampiseho fa mampitombo ny vatana mangatsiaka. Ny fiheverana tokana misy azy dia ny fanesorana ny testosterone amin'ny fotoana fohy. Ny famoahana ny milina iray amin'ny LGD4033 isan'andro dia manome fitomboana miavaka amin'ny hozatra, fa ny fanafarana kokoa, ny tsara kokoa ny vokatra.
Nisy fisedrana iray hafa natao, ary noheverina fa ireo olona izay nandray 22mg isan'andro dia tsy nijaly tamin'ny lozisialy na olana ara-pahasalamana. Ao amin'ny lozam-pifamoivoizana, ny LGD4033 dia nanatsara ny masom-bolo, ny lanjan'ny taolana, tsy manimba ny atiny na ny tavy prostate. Semaglutide Effects Tahaka ny Peptide? TSIA, betsaka kokoa noho izany!
Na izany aza dia nanamarika fa ny LGD4033 dia tsy manandratra ny fahaverezan'ny vatana ary raha ny fanalana azy irery ihany, dia tsy maintsy maka iray fotsiny ihany izy io fa tsy mionona. Mba hisorohana ny fiantraikany vokatry ny fanafoanana hormonina, dia tsara ny hanaovana PCT aorian'ny fampiasana azy.
Mpandresy lehibe hafa amin'ny tontolo SARM ity. Voamarika fa tamin'ny totozy, dia nitarika ho amin'ny fanentanana ny fitomboan'ny mitochondria amin'ny hozatry ny hozatra izany, mihena ny areti-maso, mitombo ny fiaretana ary manampy amin'ny famoahana ny vatana.
Na izany aza, nomena ny voalavo SR9009 as injection. Rehefa nalaina am-bava, dia mety tsy hisy fiantraikany mitovy izany satria manana 2% bioavailability izy ary havaozina ao amin'ny rafitra raha vantany vao mandray izany ianao.
MK677 dia misy hormone mitombo kokoa, ary raha tokony hanafoana ny hormonina mitombo ao amin'ny vatanao izy dia manampy izany. miaraka MK677, afaka manantena ny fitomboan'ny hanoanana, hampitombo ny fahombiazana sy ny fahaverezan'ny tavy.
Tsy misy fanadihadiana olombelona natao tamin'ity SARM ity. Ny fikarohana natao tamin'ny fiantraikany tamin'ireo mpihatsaravelatsihy dia nampiseho fa ny fampiasana azy dia mihetsika amin'ny ankamaroan'ny fototarazo toy ireo izay atosika rehefa mihena na mihazakazaka. Na dia toa tsy nisy fiovana manan-danja aza izany, ny totozy nampiasa ny GW-501516 sy ny nampiasana tamin'izany fotoana izany dia nampiseho valiny mahatalanjona.
Ao amin'ny totozy nampiasa an'io zava-mahadomelina io nandritra ny efa-herinandro nandritra ny herinandro maromaro, dia nitombo ny isan'ny 68% tamin'ny fotoana nihazakazahana ary ny 70% dia nitombo tao anatin'ny halavirana. Ankoatra izany, avo roa heny ny kibony.
Ao amin'ny fanadihadiana natao tamin'ny mpikiky, mandray GW-501516 miaraka amin'ny fanatontosana dia nitarika ho amin'ny fivelaran'ny mitochondria 50 amin'ny hozatry ny hozatra, ary vokatr'izany dia afaka mamokatra angovo mahery vaika kokoa ny tavy noho ny fampihenana ny reraka.
Ny fijerena iray hafa natao dia ny hoe amin'ny totozy GW-501516 dia mampihena ny fatin-kibo rehefa mitandrina ny hozatra.
GW-501516 no SARM tsara indrindra raha mikasa ny hanatsara ny fahaizanao ianao ary handoro ny tavy rehefa mitahiry ny hozatra.
Izy io dia SARM tsy matoatoa izay mavitrika, ary mifandray tsara amin'ny mpanamboatra androgen izay mitarika ho amin'ny fitomboan'ny voanjo sy ny fihenan'ny vozon'ny tavy.
Ny fametahana dia ny dingana izay ahafahanao mandray karazana SARM maro samihafa amin'ny fotoana iray hanatsarana ny dingan'ny famonoana, ny fanesorana sy ny fanasitranana. SARM dia tena maro karazana satria afaka manapa-kevitra ny hampiasa azy ireo irery ianao na amin'ny ampahan'ny paka.
Na dia manome vokatra goavana aza ny SARM rehefa misy ny sasany dia mety tsy ho voaro amin'ny fiatoana. Mba hahatratrarana ny tanjona manokana anananao, dia mila mahafantatra ny karazana SARMs mifanaraka amin'izany ianao.
Miaraka amin'ny steroids anabolic
Trenbolone no steroid anabolic tsara indrindra miaraka amin'ny GW501516 satria hanampy amin'ny fanafahana ny olana amin'ny fiaretana. Azonao ampiasaina ihany koa ny GW amin'ny doka hafa steroid hafa raha tiantsika ny hampitombo ny fiaretanareo sy ny fandefasana tavy.
Ny LGD dia matetika ampiasaina amin'ny steroid hafa hanampy amin'ny hozatra nefa tsy mety hampidi-doza ny vokany. Ostarine, etsy ankilany, dia ampiasaina amin'ny fonosana mba hitazonana ireo vatosoa mahasalama.
Ny fitsaboana amin'ny serasera dia ny vanim-potoana ahafahan'ny olona iray mifandray amin'ny zava-mahadomelina na zava-mahadomelina mba hamporisihana ny haavon'ny estrogen na hormona hiverina amin'ny ara-dalàna taorian'ny sazy SARM. Ny fanaraha-maso ny fitsaboana amin'ny serasera dia tena zava-dehibe amin'ny fiantohana fa ny vatanao dia tsy miteraka fiantraikany ratsy. GW501516 sy SR9009 dia tsy manakana ny famokarana hormones ao amin'ny vatanao, ary mahasoa azy ireo mandritra ny PCT. Maro ihany koa ireo olona manoro hevitra ny fampiasana Ostarine satria, amin'ny dosie tsara, dia manampy amin'ny fisorohana ny ratra ny muscle.
Ny PCT dia tsy maintsy an-tery, saingy tokony horaisina tsara ny fahasalamana ho an'ny hormonina. Tokony haharitra enina herinaratra eo ho eo izy io, na dia mety ho toy izany aza ny faharetany. Ankoatra izany, tokony hampifangaro azy amin'ny sakafo sy ny fiofanana tsara ianao.
Mety ho sarotra ny mahazo ny hozatra lehibe ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy maintsy misafidy ny SARM tsara indrindra miaraka amin'ny sakafo mahazatra ianao mba hahatratrarana izany. Rehefa tonga ny fotoana hanangonana ireo hozatra ireo, ny SARMs manaraka dia hanao ny fihetsika. LGD-4033 dia hanampy anao hahazo hery sy ny hozatry ny fo. Rad-140 dia safidy tsara kokoa ho an'ny fanatanjahan-tsoa satria izy no manana hery mitovy amin'ny testosterone, fa ny fahasamihafany ihany dia tsy mahatonga anao hijaly noho ny androgenic effects effects.MK-677 izay ho lasa hormonina mitombo koa dia mety hiasa amin'ny fanorenana hozatra.
Misy fomba samihafa izay ahafahan'ny bodybuilders atao ny manao dingana. Afaka manao izany ao anatin'ny vanim-potoana lava kokoa na ao anatin'ny fotoana fohy kokoa. Amin'ny fomba roa ireo, ny tanjona voalohany dia ny mitahiry arakaraky ny habetsahan'ny muscle araka izay azo atao. Ny MK-2866 dia hanampy amin'ny fiarovana ny tombony satria SARM milamina sy miasa tsara raha misy ny tsy fahampian'ny kaloria.
Tena mahomby ny SR na ny GW satria manatsara ny fatiantoka. GW + S4 no fiasa mahazatra indrindra ampiasaina rehefa tapahina. Ho gaga ianao ny habetsahan'ny vatanao halefanao rehefa ampiasainao miaraka amin'ny fihinanana amin'ny tsy fahampiana.
Ny iray amin'ireo sakafo tsara indrindra azo ampiasaina miaraka amin'ny SARM mba hampiroborobo ny fandrosoana sy ny fitrandrahana dia ny Creatine. Hcgenerate koa dia mahomby amin'ny fampitomboana ny famokarana testosterone ary azo alaina miaraka amin'ny S4 sy LGD.
Eto no misy anao ny karazana SARM telo mba hahatratrarana ny vokatra tianao. Izany no fonosana tsara indrindra sy ny malaza indrindra amin'ireo stacks hafa. Amin'ny fampifangaroana Ostarine, GW, sy S4, dia mahazo fanatsarana ny fiaretana, ny fatiantoka matavy, ary ny fandrosoana marefo. Ny tena mahaliana amin'ity tabilao ity dia ny manome anao fotsiny ny zava-drehetra izay hanampy anao hahatratra ny tanjon'ny vatanao.
Izay rehetra manana olana ara-pihetseham-po amin'ny gyno dia tokony ampiasaina amin'ny tohibitor aromatase raha toa ka miseho fahatelo. Na dia tsy fahita firy aza ny vokatry ny arimidex na ny Aromasin dia atolotra.
Alohan'ny fanapahan-kevitr'izy ireo raha handray SARM, mety hanontany tena ianao raha toa ka voaro izy ireo. Ny zavatra voalohany nanamarika dia ny SARM dia tsy nianatra tsara satria ny ankamaroan'ny fikarohana dia natao tamin'ny mpangalatra. Afaka miantehitra aminy isika satria ny 98% amin'ny ADN dia mitovy amin'ny an'ny mpihaza ary noho ny vokatra tsara, dia afaka miteny tsara isika fa ny fampiasana ny SARM dia fomba handehanana. Loharanom-pahalalana Nootropic: Reviews, Effects, Dosage
Ny iray amin'ireo zavatra izay mahatonga azy ireo ho azo antoka kokoa noho ny steroids dia ny tsy manakana ny famokarana testosteron ao amin'ny vatana raha manao steroids. Tsy midika izany fa tsy manakana azy ireo tanteraka izany, fa ny henjana dia latsa-danja kokoa. Amin'ny fampiasana SARM dia tsy voan'ny aretina azo avy amin'ny famokarana testosterone ianao, ohatra, ny fampihenana ny fitsapana. Ny henjana, na izany aza, dia voafaritry ny habetsahan'ny SARMs izay azonao; Ny avo kokoa ny dosage, ny fanafoanana bebe kokoa dia mety ho voan'ny aretina. Ny fanararaotana dia andrasana ho ambony kokoa amin'ny fametahana.
Raha ny zava-misy, dia tsara ny manamarika fa ny SARM dia miteraka vokatra hafa toy ny fanafody hafa. Ny voka-dratsin'ny SARM dia malemy ary tsy dia misy fiantraikany amin'ny fiasanao isan'andro. Mba hisakanana anao tsy hijaly amin'ny voka-dratsiny dia manome antoka anao ny dosie nomena anao amin'ny fotoana voafaritra tsara.
Ny zavatra iray hafa izay mahatonga ny SARMs ho azo antoka kokoa noho ny steroids dia satria raha vantany vao misintona ny fampiasana azy ireo ianao, dia mety hiverina haingana kokoa ny vatanao raha oharina amin'ny steroïde. Satria tsy manakana ny famokaranao hormonina izy ireo, dia afaka miasa tsara na dia tsy ampiasaina aza ny vatanao. Raha toa ka manao PCT ianao, dia mila pilina vitsivitsy fotsiny ianao satria tsy dia niova firy tamin'ny Estrogen na DHT mora izy ireo. Ny SARM sasany dia tsy mila PCT akory raha vao vita ny fampiasana azy ireo. Ny SARM dia mety hitarika amin'ny fitomboan'ny aretina vokatry ny homamiadana. Ny fandinihana natao tamin'ny totozy dia nampiseho fa mety hiteraka korontana ao amin'ny tsinay ny Cardarine.
Farany, ny SARM sasantsasany dia tsy mety ny zavatra lazainy. Izany dia noho izy ireo mifangaro amin'ny akora simika misy poizina noho ny dingana famokarana manjavozavo na ny fifehezana kalitao. Ireo mpivarotra tsy mahay mandanjalanja dia mety hampiditra tsikelikely amin'ny vokatra azo avy amin'ny zava-mahadomelina koa mba hampitombo ny habetsahana sy ny tombony. Mislabelling dia tranga hafa noeritreretina matetika, ary maro ny mpandatsa-biriky no latsaka amin'izany.
Ny ara-dalàna ny fampiasana sy fivarotana SARMs miankina amin'ny firenena misy anao. Nosimbàn'ny Masoivoho Iraisam-pirenena misahana ny Doping (WADA) izy ireo, ary ny Komity Olaimpika Iraisam-pirenena dia mikasa ny hitsapa azy ireo tsy ho ela.
Ao an-tsena ankehitriny, mpivarotra maro no manolotra SARMs. Ny kalitao no mamaritra raha tsara na ratsy ny vokatra. Ny SARM tsara dia hanome anao ny vokatra tonga lafatra izay mifantina amin'ny asa nefa tsy mahatonga anao hijaly vokatry ny androgenic effects toy ny olana amin'ny prostaty. SARMs ratsy dia tsy hanome anao ny vokatra tianao. Fandaniam-bola fotsiny izy ireo. Ny antony dia hoe voarara izy ireo ary mety tsy misy SARM mihitsy aza. Ny mbola ratsy kokoa, dia mety ho voan'ny Prohormones methylated izay mety miteraka vokatra hafa toy ny fanitarana ny clitoris sy ny virilization amin'ny vehivavy. Amin'ny lehilahy, mety miteraka olana momba ny gnecomastia sy ny olana hafa momba ny estrogen izany, toy ny olana amin'ny aty.
Mihevitra ny SARMs fa tsy manafoana ny endokine ny endri-tsoratra, tokony ho azonao ny tsara indrindra izay tsy hamela anao hanana fahasalamana ara-pahasalamana. Amin'ny fisafidianana ny mpamatsy tsara indrindra, azonao atao ny milaza mialoha ny karazana vokatra azo andrasana, ny mety ho fiantraikany sy ny fomba ahafahanao miatrika azy ireo. Ny mpamatsy tsara dia hamidy ny SARM izay azo tsoahina tsara ny dosage ary tsy voamarina amin'ny voambolana tsy fantatra.
Isika no mpamatsy SARM tsara indrindra, ary hanome anareo antony antony aho. Ao amin'ny Phcoker.com dia mivarotra karazana sariohatra maro samihafa an-tserasera, ary ny rehetra dia madio, mahomby ary avo lenta. Amin'izany fomba izany, ianao dia manana antoka fa ny vokatra azontsika dia manome izay tsy antenainareo. Ny zavatra rehetra ataonareo dia ny baiko avy aminay, ary ny saran-dalana ho any amin'ny toerana misy anao no fotoana fohy.
Buy SARMs Avy amintsika ary mijery ny biorabokareo dia aleo avy amin'ny zero ho maherifo!
2019-02-14 ao amin'ny 3: 54 am
Ahoana no hividianako osteryn.
Ary te-hahazo izany vidiny izany aho.
2019-05-06 ao amin'ny 3: 50 am
Inona avy ireo vokatra azo avy amin'ny vokatra, sao misy kolikoly?
2019-05-07 ao amin'ny 1: 35 am
Hamaly anay amin'ny mailaka izahay
Bonjour, je intéressé a vos produits! Je suis a la recherche d'une augmentation musculaire sécuritaire avec un perte de graisse sécuritaire! Manontany tena aho?
2019-10-27 ao amin'ny 3: 40 pm
Aseho, mi suis intéressé a vos produits et je recherche un augmentation musculaire et perte de graisse la plus sécuritaire! Quel cycle et pct?
2019-05-20 ao amin'ny 7: 22 pm
Quiero quemar creàza una crecimiento de pene que me reccomiendan con envío a bolivia
2019-05-22 ao amin'ny 7: 33 am
Genial, Edwin, tenemos DMAA, DNP, salbutamol, synephrine hcl en polvo izay afaka manampy azy ireo. Mankanesa, misaora ny e-mail nalefanao mba hahazoana kokoa ny antsipiriany.
2019-06-04 ao amin'ny 3: 55 pm
Quiero quem era una más del mismo el tiempo, me gustaría que me mostraran un pila y precio para fin fin.
2019-06-06 ao amin'ny 1: 25 am
Noho ny antony nahatonga ny marary am-pahibemaso, dia afaka manaporofo ny fisainantsika Ostarine.
Tadiavo ny fikarohana momba ny elektronika ho an'ny tsipiriany
2019-06-04 ao amin'ny 5: 43 pm
Izaho dia manainga ny sarms mandais amin'ny españa gracias
Hola Ricardo, sí, dia manome ny YK11 ao Espaina, noho ny fanampiana an-tsoratra amin'ny elektronika. Ny vahaolana dia namoaka ny elanelana misy anao mikasika ny YK11 nanamafy ny fanovana.
2019-06-19 ao amin'ny 6: 27 pm
Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike; Ny antony, dia ny S4 dia ho an'ny. No preocupación.
2019-06-20 ao amin'ny 8: 26 pm
Ny tatitra farany, ny informatika momba ny Ligandrol ho an'ny Ciudad de México, ny fampisehoana sy ny vidiny, ny safidy malalaka.
2019-06-21 ao amin'ny 6: 04 am
Sí, podemos enviar el Ligandrol a México. Nampidiriny ao amin'ny Internet ny toro-làlana nosoratany ho an'ny mpampiasa.
2019-06-20 ao amin'ny 10: 09 pm
Inona no azoko atao raha te hahita ISO-na GMP-certificaten tsy hita ao amin'ny tranonkala?
2019-06-21 ao amin'ny 12: 28 pm
Nalefanay taminareo ny mailaka ary azafady mba hanampy azy hanamarina izany.
2019-06-26 ao amin'ny 3: 23 am
Andarines. Hijery ny bika rehetran'ity matoanteny ity eo amin'ny Raki-bolana Volapoky eto amin'i Wikibolana.
2019-06-28 ao amin'ny 3: 04 am
Hola, Manuel, sí, podemos enviarlos ao Espaina. Háganos saber que produit de SSARM desea. Gracias
2019-11-21 ao amin'ny 10: 01 pm
Salama, nikasa ny hividy SARMS aho, hoy aho hoe malefaka sy matotra aho. Fa ny nofinofiko dia ny hametraka ny 5kgs bebe kokoa amin'ny tongotro sy ny ampondra. Heveriko fa afaka mampiasa SARMS aho mandritra ny fotoana kelikely. Saingy mety tsy ara-dalàna eto eto iceland ary tsy hiditra amin'ny rafi-pahefana izay eritreretiko. Inona no azoko atao?
2019-11-29 ao amin'ny 6: 23 am
Izahay dia hanome antoka fa handefasana ny fonosana ary mampiasa fonosana hafahafa isika raha ilaina
Raha manana zavatra hividianana azy ianao dia alefaso kely aminay ny habetsaky ny baiko, misaotra.
2019-11-28 ao amin'ny 9: 39 pm
Fa ist für Frauen mits und nicht schädlich?
2019-11-29 ao amin'ny 4: 00 am